Ambohimandroso - Wikipedia
19°31′00″S 47°25′00″E﻿ / ﻿19.516670°S 47.416670°E﻿ / -19.516670; 47.416670
Isam-ponina 23 609 mponina
Ambohimandroso dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'Antanifotsy, Faritanin'Antananarivo. Ny isam-poniny dia 23609 araka ny faminavinana natao tamin'ny taona 2000, ary 42000 tamin'ny taona 2016. Ny kaodin-kaominina dia 11411 ary ny kaodin-distrika dia 114
4.1 Vokatry ny fambolena
Lalovan'ny lalam-by mampitohy an'Antananarivo sy Antsirabe Ambohimandroso ary misy Gara. Lalovan'ny lalam-pirenena RN7 ary toerana malaza isakafoanan'ny taksi borosy. Ao avaratra ny kaominina Ambohipihaonana, distrikan'Ambatolampy. Ao Antsinanana ny kaominina Antsahalava (distrikan'Antanifotsy). Ao Andrefana ny kaominina Ambatotsipihana (distrikan'Antanifotsy). Ao Atsimo ny kaominina Ampitatafika (distrikan'Antanifotsy). Mahatratra 400km toradroa ny velaran'tanin'ny kaominina
Misy fokontany 23 ao Ambohimandoso.
Mpiavy no nanorina ny tananan'Ambohimandroso tany amin'ny taonjato faha-18 tany ho any. Nandositra ny toerana niaviany izy ireo noho ny fisian'ny aretina tany ary nanorina tanana teo, izay nantsoina hoe Ambodimaromioko tany am-boalohany. Raikitra hoe Ambohimandroso ny anaran'ny tanana tamin'ny nanorenana ny Gara teo. Ahitana tsangambaton'ireo Razambe nanorina ny tanana ao (Rainitsiory, Rafaralahimanga, Rabezara sy Ramiarana).
Ny anjaran'ny tantsaha mampiasa zezika simika dia 50-75%. Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia pomme de terre. Ny zava-bolena lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia vary. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia legioma hafa. Ny isan'omby dia 7077. Ny isan'ny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelan'ny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra amin'ny lafin'ny velarantany dia mais. Ny entana lafo vidy indrindra dia orge. 35 isan-jaton'ny tanimbary no voatondraka amin'ny tohidrano na paompy. 1 ny mponina no manao asa tanana. 36 no isan'ny ombivavy be ronono. 80 ny mponina no miasa tany. 6 ny mponina no miasa amin'ny fiompiana. 13 ny mponina no miasa amin'ny sampandraharaha. 618 no isan'ny kisoa.
Ahitana toeram-pamonoana omby (abattoir) ao Tongavan'ny lalam-paritra ilay tanàna. Ahitana tobim-pahasalamana ao. Misy tsena isan'andro any. Ijanon'ny taksiborosy ilay kaominina. Ahitana orinasa mampiasa olona mihoatra ny 50. Andalovan'ny lalam-pirenena ilay kaominina. Ahitana sekoly ambaratonga fototra. Ahitana orinasa mampiasa olona 10 hatramin'ny 50. Ahitana orinasa mampiasa olona latsaky ny folo. Misy fitrandrahana harena an-kibon'ny tany amin'ny fomba indostrialy. Ahitana kolejy ao amin'ilay tanàna. Misy biraom-paositra ao.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia fiara lehibe. Ny faharetan'ny dia mankany amin'ny renivohi-paritany dia 2 ora. Ahitana lalana godorô ao amin'ny kaominina. Ny fotoam-pitaterana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 2 ora. Ny lalan-tany dia azo aleha mandavan-taona. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny andro fahavaratra dia 15000 Fmg. Ny saran-dalan'ny olona tokana mankany amin'ny tanàn-dehibem-paritany amin'ny dia 15000
1 isan-jaton'ny mponina no tena mahantra dia mahantra. 9 isan-jaton'ny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavan'ny vanim-potoana mety ahalanian'ny vokatry ny taon-dasa dia 3 volana. 25 isan-jaton'ny mponina no atao hoe manan-karena. 65 isan-jaton'ny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fiompiana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fahasalamana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny rano sy ny ala. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny asa tany. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana. Misy masoivohon'ny ministeran'ny fanabeazana.
Ny isan'ny vono olona tanatin'ny taona 1999-2001 dia 2. Ny isan'ny vakitrano tanatin'ny taona 1999-2001 dia 201. Ahitana zandary ao amin'ilay kaominina. 1 no isan'ireo mpamono olona tratra tanatin'ny taona 1999-2001.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambohimandroso&oldid=953067"
Voaova farany tamin'ny 17 Novambra 2018 amin'ny 16:56 ity pejy ity.